लिभरपूल ३ – १ आर्सनल : के लिभरपूललाई कसैले टक्कर दिन सक्ला त ? – Tesroaankha | Nepal's leading online news portal | Nepali Online News
१३ आश्विन, २०७७ ०७:५८ मा प्रकाशित
यस सिजनको मात्र ३ खेल सकिँदा लिभरपूलले स्पष्ट पारिदियो कि यदी कुनै पनि टिम लिभरपूलको पहुँचबाट ईंग्लिश प्रीमियरसिपको उपाधी आफ्नो कब्जामा पार्ने सपना बुन्दैछ भने उसले गुमाउने हर एक पोइन्टसँगै त्यो सपना टुक्रीँदै जानेछ । सिजनको पहिलो ३ खेल्मध्यको २ खेलमै चेल्सीलाई स्ट्याम्फोर्ड ब्रीजमा अनि आर्सनललाई एन्फिल्डमा हराउँदै लिभरपूलले आफुलाई पछील्लो सिजन जत्तिकै बलियो साबित गरिसकेको छ ।
लिभरपूललाई बलियो टक्कर दिनसक्ने मानिएको टिम म्यान्चेष्टर सिटीले आफ्नो पुराना कमजोरीहरु सुल्झाउन पार्न सकेको छैन । लिसेष्टर सिटीसँग ५-२ को हारसँगै बरु उल्टै नयाँ कमी कमजोरी थपिएको देखियो । पछील्लो सिजन ९ हार बेहोरेको म्यान्चेष्टर सिटीले डियास र एकेलाई अनुबन्धित गरेसँगै ग्वार्डिओला पुराना कमजोरी सच्चिने आशामा छन् । उनको यो कदम सही साबित हुन्छ या हुँदैन त्यो त हेर्न बाँकी नै छ तर अहिलेको स्थितिमा हेर्ने हो भने लिभरपूलको यो टिममा न कुनै कमी कमजोरी नै देखिँदैन । न त मानसिक न त कुनै रणनितिक ।
म्यान्चेष्टर सिटी जब लिसेष्टर सिटी विरुद्दको खेलमा पछाडी पर्‍यो, उसको खेल झनै बिग्रँदै गयो र नराम्रो हार बेहोर्‍यो । तर लिभरपूल जब आर्सनल विरुद्दको खेलमा पछाडी पर्‍यो, उ झनै अक्रामक बन्यो र केहि क्षणमै खेललाई बराबरीमा ल्यायो । उसलाई खेलमा अग्रता लिन पनि थप ६ मिनेट मात्र लाग्यो र खेलको अन्तिम समयमा अर्को गोल थप्दै खेल्को नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्न सफल रह्यो ।
डिफेन्स लाईनमा विरोधी टिमले लगातार दबाब दिँदा जसरी म्यान्चेष्टर सिटी पछील्लो सिजन र लिसेष्टर विरुद्दको पछील्लो खेलमा डग्मगायो, के लिभरपूल पनि त्यसरी नै डग्मगाउँछ होला त ? असम्भव त पक्कै छैन तर अहिलेसम्म जे देखियो त्यसको आधारमा भन्ने हो भने त्यस्तो क्षण आउला भनेर नसोचेकै राम्रो होला।
लिभरपूलले बाँकी सबै टोलीलाई चुनौती दिसकेको छ । कसैले लिभरपूललाई भेट्टाउन सक्छ त ? कसैले पोइन्ट गुमाएर पनि लिभरपूललाई उपाधिको लागी टक्कर दिना सक्छ त ? हर एक खेल अनि हर एक गुमेको अंकसँगै बाँकी टिमका लागी लिभरपूललाई पछ्याउन दबाब अझै बढ्दै जानेछ ।
त्यसो भए लिभरपूललाई कसले टक्कर देला त ?
अहिलेको अंक तालिका हेर्ने हो भने एभर्टन र लिसेष्टरको अहिलेसम्मको प्रदर्शन शानदार छ । तर यी दुई टिमले पूरा सिजन उस्तै नतिजा निकाल्न सक्छन् भनेर अनुमान गर्नु शायद उपयुक्त नहोला । मेरो यो अभिव्यक्ती यि दुई क्लबलाई होच्याउने मनशायले दिईएको अभिव्यक्ती भने पक्कै होईन । अहिलेसम्म हामीले ईंग्लिश प्रीमियर लिगमा जे देखेका छौँ त्यसको आधारमा व्यक्त गरिएको एक तितो सत्य भने पक्कै हो ।